दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ बुधबार बिहान बाँडफाँट हुने, कतिले पाउँछन् शेयर ? – Upahar Khabar
दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ बुधबार बिहान बाँडफाँट हुने, कतिले पाउँछन् शेयर ?
प्रकाशित मिति : ७ असार २०७९, मंगलवार १७:२० June 21, 2022
काठमाडौँ – दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले जेठ २६ गतेदेखि निष्काशन गरेको आईपीओ बुधबार बिहान ९ बजे बाँडफाँट हुने भएको छ। भोलि बिहान ९ बजे सिद्धार्थ क्यापिटलको कार्यालयमा बाँडफाँट गरिने क्यापिटल मर्चेन्टका हेड रिकेश श्रेष्ठले बताए।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई छुट्टाइएको शेयर बाँडफाँट गरी बिक्री हुन बाँकी रहेको २ लाख ९७ हजार ८४० कित्ता सहित गरी प्रतिकित्ता १०० अंकित दरका २१ लाख ९५ हजार ५०९ कित्ता साधारण शेयर निष्काशनमा ल्याएको थियो ।
त्यसमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात ६५ हजार ८६५ कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ९ हजार ७७५ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरुलाई बाँडफाँट गरिएको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बाँकी २० लाख १९ हजार ८३९ कित्ता शेयर मात्रै वितरण हुनेछ ।
माग भन्दा बढी आवेदन परेकोले कम्पनीको शेयर धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका अनुसार गोलाप्रथाबाट न्युनतम १० कित्ताको दरले शेयर वितरण हुनेछ । त्यस अनुसार २ लाख १ हजार ९८६ जनाले मात्रै १० कित्ता शेयर पाउनेछन्। बाँकी आवेदकको भने हात खाली हुने छ।
हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेडले असार १५ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्दै
पत्रकार रवि लामिछानेले खोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी